Toro-làlan'ny tady nylon China natao ho an'ny orinasa crane 10 taonina sy mpamatsy | H & F.nylon
Ity manaraka ity dia karazana guiler nylon mahazatra.
* 200 * 40 11
* 200 * 36 9
* 165 * 50 30
Fenitra fampisehoana guider gueraine crane standard
(1) Ny fahaizana miditra sy mivoaka ny tady tsy misy trangan-javatra.
(2) Ny fahaizana manindry ny tady azo antoka ka tsy afaka mitsambikina avy ao anaty lalan-kely ilay tady tariby.
(3) Ny fahafaha-mihetsika mihetsika sy milahatra tady nefa tsy mahasosotra azy ireo.
(4) Fametrahana mora, fanaparitahana ary fikojakojana ireo mpitari-dalana.
(5) Ny torolàlana amin'ny tady dia tsy mahazaka akanjo.
(6) Hamarino fa ny tadin'ny tariby vy dia manana zoro fihenan-tsofina amin'ny alàlan'ny axis axe nefa tsy misy fanelingelenana eo amin'ny tadiny sy ny varingarina.
(7) Rehefa ampiasaina miaraka amin'ireo fetra fametahana dia tokony ho azo antoka ny vokany mametra azo antoka.
Ny tombony an'ny gueron tady nylon:
(1) Aza atao mihodina ny tady tariby mba hiantohana ny fiasan'ny herinaratra ara-dalàna.
(2) Manitatra ny androm-piainan'ny tady sy kofehy tariby.
(3) Fifanakalozana tsara sy kalitao miorina.
Ireo torolàlana tady vaovao dia misy tombony miharihary amin'ireo izay ampiasaina amin'ny resaka fampisehoana, indrindra amin'ny lafiny.
Ny fahamendrehan'ny mpitarika Nylon raha ampitahaina amin'ny guider metal.
(1) Ny tadin'ny tadin'ny fitaovana fitaritana tady, mivoaka amin'ny tady mahazaka mampiasa hamafisana, fanoherana ny abrasion, fanoherana ny harafesina, hakitroky, plastika injeniera mahery vaika kely - famolahana tsindry nylon (MC), tsotra ny fizotry ny famokarana. Ny masontsivana fampisehoana teknikan'ny MC nylon dia aseho amin'ny tabilao mifamatotra.
(2) Ny nut ny torolàlana tady aloha sy aoriana an'ny fitarihan'ny tady dia mifamatotra amin'ny tsipika pin, izay mety amin'ny fametrahana sy famongorana. Avy ao amin'ny bikan'ny tady mankany amin'ny làlan'ny tady no misy 10° zoro mivalana, rehefa mitongilana ny tady tariby, noho ny fihamafisin'ny cast (MC) nylon, mahazaka ny torolàlana amin'ny tady ≤ 3 ° hisarika oblique.
(3) Ny hakitroky nylon (MC) dia kely dia kely, manana menaka manitra sy mahazaka tena, noho izany ny lanjan'ilay torolàlana amin'ny tady dia maivana, tsy misy reraka sy rovitra amin'ny tady tariby, afaka manitatra ny fiainana ny tady tariby.
(4) H-type Hist type hoist elektronika karazana H1, mifanaraka amin'ny fomba fitsapana ho an'ny herinaratra ZBJ80013.4-89 + tariby tariby "ho an'ny fitsapana isan-karazany. Rehefa tsy misy herin'ny lanjan'ny tenany manokana ny tady, ny tady tariby vy dia azo esorina malalaka amin'ny tari-tady ao amin'ny fivoahan'ny tady, ary hahatratra ny JB / ZQ8004-89 amin'ny kalitaon'ny index an'ny vokatra ambony; Ao amin'ny enta-mavesatra M4 ho an'ny asa fitohanana ao anatin'ny fitsapana fiainana 120 ora, andramo ny fitarihan'ny tady, ankoatry ny tady ivelan'ny sakana, tsindrio ny kodiarana tady mitafy eo an-toerana, tsy misy fiantraikany hafa amin'ny fampiasana ny fampisehoana ny hanimba.
(5) Azo ampiasaina mivantana ho toy ny tady fitarihana ny herinaratra-porofom-piarovana herinaratra.
Previous: roller nylon amin'ny tahiry
Manaraka: habe manokana nylon Coupling
Torolàlana amin'ny tadin'ny nylon
Torolàlana tadin'ny tady nylon